Danilo da Silva Hooyo sheeko dheere ah Xaqiiqooyinka looyaqaano
Home SOUTH AMERICA FOOTBALL CORRADA Ciyaartoyda Kubadda Cagta ee Brazil Danilo da Silva Hooyo sheeko dheere ah Xaqiiqooyinka looyaqaano
LB waxay soo bandhigeysaa sheeko buuxda oo ah Genius kubadda cagta oo si fiican u yaqaan magaca "Dan". Dabeecadda Caruurnimada ee Danilo iyo Silva iyo wargeysyada aan la isku qorin Xaqiiqooyinka ayaa kuu keenaya xisaab buuxa oo ah dhacdooyin la taaban karo laga bilaabo waqtigiisa carruurnimada ilaa taariikhda. Falanqayntu waxay ku lug leedahay sheekadiisa noloshiisa ka hor inta caan ka ah, asalka qoyska, nolosha xiriirka, iyo xaqiiqooyin kale oo caddayn ah oo caddaynaya (wax yar).
Haa, qof kastaa wuu ogyahay muuqaalka muuqaalkiisa. Si kastaba ha ahaatee, waxoogaa yar ayaa ka warqabta waxyaabo badan oo ku saabsan da 'yarta Silva ee Bio kaas oo aad u xiiso badan. Hadda oo aan ado kale, aan bilaabi.
Danilo da Silva Hooyo sheeko dheeri ah Xaqiiqooyinka looyaqaano -Nolosha Hore
Bilaabidda, Magaca buuxa waa Danilo Luiz da Silva. Wuxuu ku dhashay maalintii 15th ee July 1991 hooyadiis, Maria José da Silva iyo aabihii, José Luiz da Silva ee Bicas, oo ah degmada Brazil ee gobolka Minas Gerais.
Danilo qoyskiisu waxay asal ahaan ka soo jeeda qowmiyadda madow ee reer Brazil kuwaas oo leh taariikh nolol xumo iyo dagaal ah meel ay ku nool yihiin bulshada koonfurta Amerika. Baaskiil madow oo madow ah sida Danilo oo hadda soo galey guurka isku dhafan oo isku dhafan oo dhaliya maqaarka maqaarka.
Danilo wuxuu ku soo bicitimay Bicas, oo degmo ah oo ku nool xNUMX iyo saacado 13,000 waqooyiga Rio de Janeiro.
Bicas sida sawirka hoose ku qoran waa dhibco soo jiidasho badan oo loogu talagalay muhaajiriinta Talyaaniga iyo jinsiyado yaryar.
Danilo da Silva Hooyo sheeko dheeri ah Xaqiiqooyinka looyaqaano -Shaqo-bilaabid
Da'yarta da'da yar ee Danilo, isku daygiisii ​​ahaa inuu noqdo ciyaaryahan kubadda cagta ayaa ka yimid dhiirigelinta uu ka helay halyeeyga Edson Arantes do Nascimento oo loo yaqaano sida Pele.
Ka dib markii uu ku soo kordhay magaalo oo ay ku dhamaatay markii kubada cagta ay cagaha isku taagto, waxa u sahlaneyd dhalinyarta Danilo inay doortaan kubadda cagta halkii ay aadi lahaayeen dugsiga. Sida ugu fiican, Danilo wuxuu ahaa 13 da'da markii uu kubada cagta u qaaday si dhab ah. Doonitaankiisa kubadda cagta wuxuu ku arkay isaga oo ku jira 2004 oo ka tirsan kooxda dhalinyarada ee deegaanka, Tupynambás oo isaga siinayay marxaladdiisa si uu u muujiyo tayadiisa. Inkastoo uu kooxda ka yahay, barashada xirfada uu ku leeyahay qaabka uu ujoogaayo iyo labo jeer oo ku guulaystey koobka adduunka Cafu sawiradaas oo baray sida loo ciyaaro booskiisa.
Ka dib labo sanno oo uu dib ugu soo laabtay dhammaan kubadda cagta ee Tupynambás, Danilo wuxuu dareemay baahida loo qabo in uu ciyaaro kubada cagta tartanka. Wuxuu go'aansaday inuu u wareego dhinaca dhalinyarada América Mineiro ee ku yaalla Belo Horizonte. Danilo wuxuu kooxda u arkay inuu yahay boorsad ay u horseeday inuu ku guuleysto xirfad shaqo oo ku haboon dhalinyarada.
Danilo da Silva Hooyo sheeko dheeri ah Xaqiiqooyinka looyaqaano -Kusoo caan bax
Danilo da'diisa oo ah 18 wuxuu dhammeeyey xirfaddiisa dhalinyaradiisii, wuxuuna ku biiray kooxda sare ee América Mineiro. Waxa uu ka sara mariyey dhamaan ciyaartoydii ugu fiicnaa ee kubada cagta ka dib markii uu dhaliyey goolal muhiim ah kooxda.
Marna lama qaadin ka hor inta uusan Brazil ku soo biirin Santos. Dooxada Danilo ee kor u kacday ee Santos ayaa timid xilligii saxda ahaa. Waxay timid waqtigii uu dhaliyay goolkii ku guuleystay 2011 Copa Libertadores (Koonfurta America oo u dhiganta UFA Champions League - markii ugu horeysay tan iyo 1963). Hoos waxaa ku qoran sawirka dhalinyarada da 'yarta ah ee Danilo ee koobkiisa Copa Libertadores.
Tan iyo markii uu ku guuleystay Copa Libertadores Neymar (sawirka hoose ee koobkan), awoodda uu Danilo u leeyahay inuu si caan ah ula tartamo ayaa si toos ah u dhigtay qaabka uu kubada gacanta u qabtay.
Tani waxay sidoo kale ahayd wakhti badan oo kooxo yurub ah ay ogaadeen isaga. Sida laga soo xigtey suuqa kala iibsiga ee 2012 January, kooxaha ka yimid Yurub ayaa bilaabay inay wacdiyaan adeegyadiisa. Inkasta oo qandaraaskii sii daayey ee culus € 50 million halka madaxweynaha Porto Porto uu sii joogayo si uu ugu saxiixo heshiiskiisa, isagoo bixinaya qandaraaskiisa iyo qandaraaskiisa. Tani waxay ahayd sida uu riyadiisa Yurub u soo maray. Inteeda kale, (Waqtiga Real Madrid iyo Man City) sida ay sheegaan, hadda waa taariikh.
Danilo da Silva Hooyo sheeko dheeri ah Xaqiiqooyinka looyaqaano -Nolosha Xiriirka
Gadaal kasta oo weyn, waxaa jira haweeney weyn, ama sida hadalku u socdo. Kadib Danilo guuleystay, waxaa jiray mar ka mid ah saaxiibtiis qurxoon ee qof ka tirsan Clarice Sales (sawir hoose oo la socotay ninkeeda) oo markii dambe u jeestay xaaskiisa jecel.
Labada qof ee jecel waxay go'aansadeen inay ilmo ubadkooda ka hor intaysan guursan. Waxay leeyihiin wiilkooda, Miguel on 9th ee April, 2015. Hoos waxaa ku qoran Danilo xaaskiisa quruxda badan iyo Miguel cusub oo u dabaaldegaya sawirkiisii ​​ugu horeeyay ee ka soo jeeda aabihiis.
Ka dib markii sannado 7 ay wada joogaan, Danilo iyo Clarice Sales ayaa ugu dambeyntii dareemay inay ahayd waqtigii la xiriiir lahaa. Waxay guursadeen maalinta 17th ee June 2017 ee Bicas, Brazil.
Danilo iyo Clarice labadoodaba waxay lahaayeen arooskooda wax yar ka hor taariikhda ay qorsheeyeen. Waxay markii hore bilaabeen munaasabada xafladda arooska ee June 30, 2017, laakiin waxay go'aansadeen inay ka dhacaan maalinta 17 ee bisha taas oo ahayd 13 maalmood ka hor taariikhda arooska dhabta ah.
Hoos waxaa ku qoran sawirkooda arooska iyo wiilkooda Miguel. Sida hoos ku aragtay, dhammaan xubnaha qoyska oo ay ka mid yihiin Danilo aad u dhoola cad oo ka gaaban kan ka weyn arooska weyn ee arooska.
Danilo ayaa aaminsan in wiilkiisa Miguel (sawirka hoose) inuu hogaamiyo jiilka labaad ee kubadda cagta ee Danilo Luiz da Silva Family.
Danilo's LifeStyle: Shaki la'aan, waa qaab nololeedka Danilo ee ka caawin kara inuu abuuro sawir buuxa oo shakhsi ahaaneed. Danilo waxaa la arkay inta badan, isagoo ku riyaaqaya waqti fiican tayada.
Danilo da Silva Hooyo sheeko dheeri ah Xaqiiqooyinka looyaqaano -Naftaada Shaqsiga
Ka dib markii uu bilowday, Danilo waxaa u muuqday taageerayaal isagoo ah qof had iyo jeer isha ku haya garoonka dhexdiisa iyo xitaa sawirada qoyskiisa.
Tani waxay keentay in Danilo lagu qaldo sida qof oo leh astaamo dareen ah. Si kastaba ha noqotee, qodista qoto dheer, waxaan ku siinaynaa xaqiiqooyin ku saabsan shakhsiyadiisa.
Marka la eego xooggiisa, Danilo waxaa loo arkaa in uu yahay asxaab sida qof si adag u ilaaliya wax waliba isaga khuseeyo. Tani waxay caddaynaysaa habka uu u egyahay qoyskiisa sida lagu arkay sawirka xiriirkiisa noloshiisa.
Danilo waa mid cajiib ah (banaanka iyo garoonka dhexdiisa), daacad u ah (inta badan xaaskiisa). Sida uu jecel yahay, Danilo waa taageere hiwaayad guri ku saleysan. Wuxuu jecel yahay inuu ku raaxaysto meel u dhow biyaha iyo inuu cuno cunto wanaagsan leh qoyska. Calaamadda tattoo is-dhaafsiga ee gacantiisa hoose waxay muujinaysaa inuu ka yimid asal katirsan reerka.
Marka la eego waxa uu necebyahay, Danilo ma dareemo raaxo leh shisheeye. Wuxuu necebyahay naqdi kasta oo waalidkiis ah oo muujinaya noloshiisa gaarka ah ee dadweynaha. Wakhtiga qorista, wax yar ayaa laga yaqaanaa walaalkiis (s), walaasha (s), gabadha iyo niyada.
Sida waqtiga qoraalladan, Danilo oo ah nin hodan ah ayaa leh qiyaas ku filan oo ka badan $ 21 million. Inkasta oo Cafu uu yahay qaabka uu ku daydo, Danilo ayaa mar uu carabka ku adkeeyay erayadan;
Anigu waxaan ahay nin u gaar ah. Anigu iskuma barbardhigi doono qof kale sababtoo ah waxaan leeyahay sifooyinkeyga.
Hantida FACT: Waad ku mahadsantihiin akhrinta nooca da'da da 'da Silva Story Story. At LifeBogger, waxaan ku dadaalnaa saxnimada iyo caddaaladda. Haddii aad aragto wax aan ku haboonayn maqaalkani, fadlan dhiibo faallooyinkaaga ama nagala soo xiriir!
Sheekada Carruurnimada Gabriel Barbosa Plus Xaqiiqooyinka Taariikh Nololeed ee Untold
Sheekada Carruurnimada Gabriel Martinelli Plus Xaqiiqooyinka Taariikh Nololeed ee Untold
Everton Soares Sheeko dhalasho sheeko dheeri ah Xogta loo yaqaan 'Biography'
David Neres Childhood Story Story Plus Xaqiiqooyinka Weriyeyaasha
Marquinhos Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka looyaqaano Weriyeyaasha
Felipe Anderson Sheeko Sheeko Xogta Xogta Aan Laheyn
Anderson Talisca Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka Wada-noolaanshaha
Sheekooyinka dhalinyarada ee Vinicius Junior Story Story
Arthur Melo Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka Weriyeyaasha
Fabinho Cartheel Story Sheekooyin Xaqiiqo Weedheer
Alisson Becker Storyhood Plus Xogta Wargelinta Lahaanshaha
Alex Sandro Story Story Plus Xaqiiqooyinka Weriyeyaasha
Philippe Coutinho Sheeko dheeraadka ah Xogta Warka Xadidan
Rivaldo Storyhood Story Plus Xaqiiqooyinka Wada-noolaanshaha